Welcome to Aayaha Nolosha » GABAR LOO XIRAY SAWIR AY ISKA QAADAY
GABAR LOO XIRAY SAWIR AY ISKA QAADAY
Haweenay Facebook-ga soo dhigtay sawir ay iska qaadday iyadoo ay bowdadeeda qaawan tahay xilli ay ku sii socotay macbadka ayaa xabsi loo taxaabay, waxaana loo diiday in la sii daayo.
Haweenaydan oo u dhalatay dalka Hindiya ayaa bishii la soo dhaafay ku guul darreysatay isku day ay ku dooneysay inay ku gasho mid ka mid ah macbadyada ay barakeystaan dadka heysta diinta Hinduuga, waxaana loo taxaabay xabsiga.
Ms Fathima ayaa maalintii talaadada ahayd xabsiga loo taxaabay xilli ay ku sugneyd xafiiskeeda oo ku yaalla magaalada Cochin, waxaana saxaafadda la xiriirtay saaxiibteed oo lagu magacaabo Aarthi SA.
Markii la xiray kadib, garsoore maxkamadeed oo ay ka soo hor muuqatay ayaa amray in 14 maalmood xabsiga lagu sii hayo, ilaa inta laga dhammeystirayo baaritaanka lagu hayo. Gabadhan ayaa lagu eedeeyay iney sawrikeeda xad gudub ugu geysatay diinta Hinduuga.
Dad mudaharaadeyaal ah ayaa bishii hore Rehana Fathima ka hor istaagay iney gudaha u gasho macbadka.
Dad mudaharaadeyaal ah ayaa bishii hore Rehana Fathima ka hor istaagay iney gudaha u gasho macbadka Sabarimala shrine oo gabi ahaanba laga mamnuucay haweenka ku jira “da’da ay caadada ku helaan”.
Dadka heysta diinta Hinduuga ayaa aaminsan in haweenka ay caadada ku dhacdo aysan nadiif ahayn, isla markaana aysan u qalmin inay galaan goobaha lagu cibaadeysto.
Arrintan ayaa muran xoog leh ka dhalisay dalkaas, waxaana in muddo ahba socday mudaharaadyo lagu kala qeybsamay.
Bishii 9aad ayay maxkamadda ugu sarreysa dalka Hindiya ku gacan seyrtay mamnuucitaankaasi, iyadoo amar ku bixisay in macbadkaas loo oggolaado dhammaan haweenka ay da’dooda kala duwantahay. Hase ahaatee dadka daacadda u ah dhaqanka macbadka ayaa diiday amarka maxkamadda, iyagoo isku gedaamay goobtaas, si ay uga hor istaagaan cid walba oo aan loo oggoleyn.